Maninona aho no manoro hevitra ireo orinasa SaaS manohitra ny fananganana CMS azy ireo
Alahady 31 Janoary 2021 Alahady 31 Janoary 2021 Douglas Karr
Nisy mpiara-miasa voahaja niantso ahy avy tao amin'ny masoivohon'ny marketing mangataka torohevitra vitsivitsy raha niresaka tamina orinasa iray izy izay nanangana ny sehatra an-tserasera. Ny fikambanana dia noforonina mpandrindra tena mahay ary mahatohitra ny fampiasana rafi-pitantanana votoaty (CMS)… fa kosa mitondra fiara hampihatra ny vahaolana avy any an-trano. Zavatra efa henoko taloha… ary matetika aho no manohitra izany. Matetika ny mpamolavola mino fa ny CMS dia base data fotsiny
WordPress: Aorian'ny Paositra Voalohany dia ao amin'ny pejy fandraisana
Alarobia, Septambra 6, 2006 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Ho hitanao eo aorian'ny pejy voalohany aorian'ny lahatsoratra voalohany tao amin'ny pejin-tranoko fa nanampy sary kartun Blaugh aho. Fotoana iray monja no nahafantarako ny fomba hanehoana tsotra ilay sariitatra amin'ny toerana tokana eo amin'ilay tranokala nefa tsy natosiko tao amin'ny sisin-tany izay tsy anisany. Ka… nandavaka vitsivitsy aho ary nahita lohahevitra roa izay mampiasa kaody vitsivitsy hanaovana an'io. Afaka nanao ilay kaody